Mgbe ekwu okwu banyere disk format, ọtụtụ ndị na-amaghị ihe ọ bụ na otú iji rụọ ọrụ ya. Nke a bụ ebe isiokwu a si abịa. Isiokwu a na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ banyere disk format, pịa na-agụ akụkụ ị nwere mmasị na:
Part 1. Gịnị bụ faịlụ usoro?
Part 2.File usoro ụdị
File usoro na-eji aka hazie na ụlọ ahịa data kasị rụọ ọrụ nke ọma na dị ka mfe inweta dị ka omume. Nke a na-eme site abaharede niile Ama n'ime obere akụkụ, echekwara n'ime ọtụtụ obere mkpụrụ ndụ ma ọ bụ ndi nke na diski ike mbanye (HDD). Ndị a sectors na-onwe ya grouped n'ime ụyọkọ (Microsoft na-akpọ ha 'oke nkeji'). The size nke ọ bụla ụyọkọ na-adabere na ole na ole kpọmkwem e ji mara nke kọmputa. Abụọ kasị mkpa ndị bụ ya arụmọrụ System (OS), hà HDD na faịlụ usoro onwe ya. Dabere na size nke ọ bụla ụyọkọ, arụmọrụ nke HDD ịdị iche iche, ma, N'ihi ya, ndị na kọmputa na n'ozuzu arụpụtaghị ịdị iche iche kwa.
Ke ibuotikọ emi anyị ga-eji nkenke oge Nchịkọta na tụnyere isi iche n'etiti atọ kasị ewu ewu na Windows faịlụ usoro: FAT32, NTFS & HPFS.
Otu n'ime ndị kasị simplistic faịlụ usoro bụ abụba. Mbụ 'File oke Isiokwu' e kere site Bill Gates na Marc Macdonald na 1977. N'ime ogologo oge nke oge ọ bụ isi faịlụ usoro maka DOS na Microsoft Windows (ruo ntọhapụ nke Windows ME).
Niile abụba usoro ọnụ ọgụgụ nke ndi na onye ọ bụla ụyọkọ bụ hà ụfọdụ ike nke abụọ (ie 1, 2, 4, 8 wdg). Onye ọ bụla mpempe ọmụma na-echekwara na ọbụna ọnụ ọgụgụ nke ụyọkọ (kacha nta 1). Ya mere, ọ bụrụ na anyị mkpa na-echekwa 40B nke ọmụma na nke nke ọ bụla ụyọkọ bụ 4KB, anyị ga-eji naanị gburugburu 1% nke ebe nchekwa dị, nke na-eme ya kama adighi ike. N'ihi ya, ndị nta na size nke ọ bụla ụyọkọ - elu arụpụtaghị ihe nke usoro.
E nwere ihe anọ isi nsụgharị nke faịlụ a usoro: FAT12, FAT16, FAT32 na exFAT. All ndị a na ụdị si dị iche na onye ọ bụla ọzọ na okwu nke ego nke bytes-eji na-echekwa index ọnụ ọgụgụ nke ọ bụla ụyọkọ. Ya mere, ihe atụ, n'ihi na FAT16, ọnụ ọgụgụ a 16 na na. Na omume, FAT12 e akasị ji na floppy diski, FAT16 na obere-sized CD na exFAT a ka na-eji dị iche iche flash draịva. The faịlụ usoro nke anyị bụ mmasị karịsịa bụ FAT32, dị ka ọ bụ ka otu n'ime ndị kasị nkịtị n'anya.
FAT32 mbụ pụtara na ntọhapụ nke Windows 95 OSR2 na 1996, nnoo bụ ihe emelitere version nke FAT16. FAT32 eji a 32B na-agwa okwu usoro maka ụyọkọ, na ịgba na faịlụ size hà 4GB. Na omume ọ pụtara na karịa ọnụ ọgụgụ nke faịlụ na FAT32 bụ 4.177.920 na karịa ọnụ ọgụgụ nke faịlụ / nchekwa kwa onye ọ bụla nchekwa bụ 65,534. Ugbu a, Windows 95, Windows 98, Windows 2003 na Windows 7 niile nkwado FAT32. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na ma Windows 2000 na Windows XP nwere ike ịgụ na ide FAT32, nnukwu FAT32 faịlụ usoro nke nwere ike kere na ndị a na nyiwe bụ nanị 32GB.
HPFS ma ọ bụ 'The High Performance File System' e kpọmkwem haziri maka OS / 2 iji belata erughị eru nke abụba. The ndekọ nzukọ nke HPFS bụ otu ihe ahụ dị ka abụba, ma ọ na-agbakwụnye, sị na atụmatụ nke akpaghị aka sorting nke faịlụ, dabere na ha aha. The filename size onwe ya e akp ruo 254 abụọ byte odide. Ke adianade do, HPFS eji anụ ahụ ndi, kama ụyọkọ, nke na-ebelata furu efu disk ohere budata. Ọzọkwa, HPFS njehie agbazi ikike nnọọ elu karịa abụba.
Otú ọ dị, HPFS nwere ya ọghọm dị ka mma. Ọ bụ ihe kasị mma maka draịva na 200MB - 400MB nso. Ọ bụrụ na ndị olu bụ ihe na-erughị 200MB, ọ na-eme HPFS kama adighi ike; na mgbe olu dị n'elu 400MB, na ọrụ ga na-ihu site na ụfọdụ arụmọrụ umuihe. Ọzọkwa na ọ ka na-akwado n'okpuru Windows NT nsụgharị 3.1, 3.5 na 3,51.
NTFS ma ọ bụ 'New Technology File System' - faịlụ usoro site Microsoft. Ndabere faịlụ usoro nke Windows NT ezinụlọ. Mbụ e gosiri na 1993, nọchiri ọtụtụ ihe n'aka ya ụzọ: HPFS. Ya isi ndozi n'elu HPFS na abụba bụ na okwu nke pụrụ ịdabere, mụbara ọrụ na wepụrụ na-agaghị emeli, jiri ya tụnyere HPFS na abụba.
Pụrụ ịdabere: Firstly, NTFS mgbe niile Failụ ya azụmahịa megide faịlụ usoro. Nke a na-enye ohere ka ngwa ngwa 'tụgharịa azụ' azụmahịa na nke ikpeazụ ime uche iji maka faịlụ usoro naghachi. Nke abuo, ọ bụrụ na otu pụrụ iche ihe nke usoro dara, ọ dị nnọọ na-akpata otu oru ọdịda, nke na-adịghị emetụta dum faịlụ usoro n'ụzọ. Thirdly, NTFS akwado na-ekpo ọkụ gwara.
Arụmọrụ: NTFS onwe ya enye a dịgasị ikpo okwu maka faịlụ ndị ọzọ usoro a ga-ewu n'elu. Ọ na-akwado ndị na-Windows NT nche nlereanya na multiple data iyi. Ke adianade do, ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na tinye nkowasi àgwà inye ndị ọ họọrọ faịlụ.
Wepụrụ na-agaghị emeli: Ọtụtụ ihe, n'okpuru NTFS hà nke faịlụ na mpịakọta e budata ụba, ka ha bụrụ ruo 2 ^ 64 bytes. Yiri abụba, NTFS na-eji ụyọkọ, nke solves nsogbu nke a ofu oru size, chere ihu HPFS si ọrụ.
Ekwu okwu nke ọghọm, ọ na-adịghị atụ aro iji ya na olu, nta karịa 400MB (yiri nsogbu na HPFS). Ọzọkwa, e nwere ka ọ dịghị faịlụ izo ya ezo n'ihi na nke a faịlụ usoro.
Ugbu NTFS bụ a ọkọlọtọ faịlụ usoro niile Windows OS, malite Windows NT na n'ihu. Isi ihe atọ mere na-ahọrọ ya n'elu FAT32 bụ:
Ike naputa site na disk-metụtara njehie na-akpaghị aka;
Mma nkwado maka nnukwu HDD;
Elu ndị ọzọ nche, dabere na ikike usoro na izo ya ezo ka igbochi ohere akpan akpan akwụkwọ;
Nanị wezụga ga-ma ọ bụrụ na ị na-eji sọrọ-booting na kọmputa gị. Inwe abụọ dị iche iche OS na kọmputa gị ga-apụta na mbụ OS ga-arụnyere na FAT32. Ọzọkwa, i kwesịrị ime ka n'aka na FAT32 bụ isi nkebi na na kọmputa.
Mmechi: Ya mere, mma faịlụ usoro maka Windows n'oge bụ NTFS. Ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ị ka na-eji FAT32 na-eche otú ịgbanwe ya, ebe a bụ adaba ndu otú iji tọghata NTFS enweghị adịkwa ọ bụla dị mkpa data.
Melite Back to My Mac na Back to My Mac Alternatives
Ọcha Mac: Gịnị nwere ike kpochara on Mac na Olee ọcha Ha
10 Best Mobile Phone Data Recovery Software - Prevent Data Loss
Olee otú Idozi ID3 Tags Ọma, Update n'Ụzọ 'Artist, Mbụ, Genre wdg
Olee otú Tọgharia Internet Explorer Ntọala
DNS Error na Internet Explorer
> Resource> Utility> Ihe nile banyere Disk Format na Format Disk